Kumanaan kun oo 300 Kun oo Xamuul ah ayaa loo dhaqaaqay Khadka Tareenka ee Baku Tbilisi RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari36 KarsKumanaan kun oo 300 oo Xamuul ah ayaa loo dhaqaaqay Khadka Tareenka ee Baku Tbilisi
01 / 12 / 2019 36 Kars, tareenka, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, Headline, TURKEY
khadka tareenka btk ilaa iyo imminka waxay qaadday kun tan oo xamuul ah
The “4. Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD Inc. Kamuran Yazıcı oo khudbad ka jeediyey "Gaadiidka iyo Saadka" oo ku saabsan baaxadda Shirweynayaasha Caalamiga ah ee Ganacsiga Silk ayaa bixiyay macluumaad ku saabsan howlaha ururka iyo khadka tareenka ee BTK.
Tani waxay gacan ka geysan doontaa ganacsiga u dhexeeya waddamada saaxiibka ah iyo kuwa walaaltinimada ah, xitaa ilaa maantadan, ku dhawaad ​​300 kun oo tan oo xamuul ah oo xamuul ah, jaantuskan 3 milyan tan muddada dhexdhexaadka ah, 6,5 milyan oo tan oo muddada fog ah ayaa la higsanayaa in la kordhiyo.
Turkey, Azerbaijan iyo waddada waqooyi-koonfur abuuray by iskaashi u dhexeeya Russia, Kazakhstan-Azerbaijan-Georgia tilmaamay wadada ka gaarey printer Turkey ah, wadada this kama badna Sea Caspian ah, ayaa sheegay in awood gaadiidka tareenka joogto ah la Russia.
"Gaadiidka BTK waxaa soo baxaya ah ee Russia Turkey"
Mersin iyo Russia waxay ku rarnaayeen khudaarta cagaaran iyo miraha haamaha qaboojiyaha ah, ilaa iyo hadda 123 kun oo 6 tan oo alaab ah oo ay wateen maraakiibta 128, gaadiid maalmeedka 6 waqti, kaas oo ku bilaabaya tareen usbuuc kasta, sii waday in la fuliyo isagoo dhaqaajinaya tareenka maalin kasta.
Agaasimaha Guud ee ereyada sida sii socota: "1 milyan oo tan oo muddo gaaban adigoo isticmaalaya waddada u dhexeeya Russia iyo Turkey, in 3 muddo dhexdhexaad ah si 5 million tons oo ah gaadiidka xamuulka ah ayaa la qorsheeyey. Intaas waxaa sii dheer, gaadiidka birta ka yimaada Erzincan ilaa Tbilisi waxaa lagu qaadaa baabuurta tareenka ee Joorjiyaanka iyadoo la adeegsanayo khadka tareenka ee BTK. 23 Luulyo 2019 wuxuu rarka gareeyay kumanaan 10 tan oo xamuul ah ilaa maanta. Tan iyo bishii Jannaayo 256 Shiinaha - tareenada block weel xamuul qorsheeyey waxaa ka shaqeeya dalka Turkiga. Marka a tareenada block todobaadkii dhigay, ka dib markii wadada Shiinaha-Kazakhstan-Azerbaijan-Georgia u timid inaad Turkey. "
"Tareenka ugu horreeya ee tareenka, 11 kun oo ah 500 km masaafada u dhaxaysa Sino-Eastern Europe wuxuu dhammeystiray maalinta 18"
Yazıcı wuxuu tilmaamay in tareenka ugu horreeya ee xamuulka qaada ee ka tagaya bartamaha Shiinaha, Xi'an, uu ahaa kii ugu horreeyay taariikhda tareennada isla markaana uu gaadho Yurub isagoo ka gudbaya khadka tareenka Caspian Sea-BTK iyo Marmaray wuxuuna yidhi, dan ka soo dejinaya maraakiibta 42 ee xamuul qaada oo sidata qaybo elektiroonig ah; Tareenka dhererkiisu yahay MNUMX mitir, oo ka kooban xNUMX kun oo 850 kiiloomitir u dhexeeya Shiinaha iyo Czechia, ayaa daboolay 11 maalintii. ”
"Ahılkelek - Xariiqa labaad ee Kars waxaa loo dhisi doonaa sida xariiq weyn"
Daabacaha, khadka tareenka ee BTK wuxuu horay ugu socon doonaa dhismaha xamuulka xamuulka ee Kars Logistics Center ayaa lagu gaadhay horumarka boqolkiiba boqol ee 70, awoodda khadka tareenka ee BTK wuxuu gaari doonaa 6 milyan 500 kun oo tan, ayuu yiri.
Daabacaha ayaa xustay: “Xariiqa labaad ee udhaxeysa Ahılkelek iyo Kars waxaa loo qorsheeyay in loo dhiso xadka ballaaran ee 1520 mm. furitaanka tareenka ee Turkey, Russia iyo waa 1435 mm maamullada ugu horeysay tareenka jir ah wadamada CIS 1520 mm ah wheelbase baabuur la set wheel oo aan badalayn in Kars Logistics Center si toos ah iman karo a. Marka laga reebo kuwan, heshiiska haamaha haamaha oo ay la saxiixatay shirkadda tareenka ee Kazakhstan KTZ Express waxaa fulinaya TCDD Transportation. muddo September November cutubyo weel 155 Kazakh loo qoondeeyey in arrinta gaadiidka u dhexeeya Turkey iyo Kazakhstan ah. "
Ruqsad bixinta kastamku gooyaan ee laga tallaabayo xadka
Marmaray via Turkey, 3. Buundada Bosphorus, Qadka tareenka ee BTK ee u dhexeeya labada qaaradood ee bixiya isgoyska tareenka ee joogtada ah ee Yazıcı, 1213 kiiloomitir khadka tareenka xawaaraha sare ee waddankeenna, 11 kun oo kiiloomitir 590 oo khadadka caadiga ah ee isku-darka guud ee 12 kun 803 kiilo mitir oo isku-xirka tareenka, saldhigga iyo saldhigga leh xarunta 784. hawlgallada rakaabka iyo saadka ayaa la fulinayaa '' Albaabada xadka tareenka 60 haamaha kastamyada haamaha kaydka ee la dhammeystirey qiyaastii 1015 daqiiqo ayaa la dhammeystirey, sugidda irridda xadka ayaa la tirtiray.
Khadka tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars si uu ugu tago Kars
Geedi Bixin by Baku-Tbilisi-Kars Railway Freight Wagons
Baku Tiflis waxay awood u yeelanaysaa in ay xamuul ka qaadato Shiinaha ilaa Yurub oo ay soo mariso Kars railway
Guddoomiyaha Gobolka Kars Eyüp Tepe ayaa booqday dhismaha tareenada Kars-Tbilisi-Bakesh
Kulanka wadatashiga ee Baku-Tbilisi-Kars ayaa lagu qabtay Kars
Baku-Tbilisi-Kars Tareen ayaa la furi karaa illaa iyo Sebtembar
Baku Kars Tbilisi Khadadka Tareenka 1 si loogu qaado Milyan Milyan
3 Million 671 Thousand 160 Rakaabka Moved ilaa Maanta ilaa Akcaray
Baku-Tbilisi-Kars Line waxay qaadi doontaa Konya!
Ma jiraan wax dhisme oo ah jidkii tareenka ee Baku-Tbilisi-Kars
Immisa xamuul ayaa lagu daabacay khadka tareenka ee Baku Tbilisi
Wadada tareenka ee BTK
Khadka tareenka BTK
Nidaamka kastamka ee irdaha tareenka